Nahoana no mitera-pihetsiketsehana ny fananganana toby miaramila Amerikana ao Henoko, Japan? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2019 4:07 GMT
Araka ny horonan-tsary navoaka tao amin'ny fampisehoana Ryuku Shimpo teo an-toerana, hatramin'ny tapaky ny septambra 2014, nampitahorina sy notanan'ny tafika ao amin'ny Mpiandry ny Morontsiraka ireo mpanao hetsi-panoherana izay manakaiky ny toby fananganana noho ny fandikana ny didim-pitsarana (令状 主義 лькі反) mba hijanona ivelan'ny faritra.
Sady farany atsimo indrindra ao amin'ireo prefektiora 47 ao Japana no prefektiora mahantra indrindra ao Japana i Okinawa
Na dia kely aza, (mandrakotra ny 0,6 isan-jaton'ny faritra misy an'i Japana i Okinawa dia ahitana toby miaramila Amerikana 28 fara fahakeliny, ary mijanona ao Japana ny telo am-pahaefatry ny miaramila amerikana. Tokotokony ho 20 isanjaton'i Okinawa no natokana ho fametrahana miaramila, lova navelan'ny sata Okinawa taorian'ny ady amin'ny maha faritra “fitokisana” Amerikana azy ary tsy niverina tamin'i Japana raha tsy tamin'ny taona 1972.
Maro amin'ireo toby miaramila Amerikana 28 no miorina ao anatin'ny faritra be mponina – ao afovoan'ny tanànan'i Ginowan no misy ny Marine Air Corps Futenma.
Nandritra ny taona maro, dia nisy ireo ezaka natao hamindrana ny tafika amerikana. Avy eo, tamin'ny faran'ny taona 2013, nanasonia fifanarahana hananganana toby an-dranomasina amerikana vaovao ao Henoko ny praiminisitra Shinzo Abe sy ny governoran'i Okinawa Hirokazu Nakaima, toerana malalaka izay adiny iray mahery mandeha fiara miala ao Ginowan.
Hatsangana eo amin'ny harambato sy bozaka an-dranomasina izay onenan'ny dugong, biby miteraka an-dranomasina atahorana ho lany tamingana izay arovan'ny lalàna Amerikana sy Japoney ny toby miaramila Amerikana vaovao ao Henoko any Okinawa.
Keiko Tsuyama, mpanao gazety Japoney monina any New York izay nanaovan'ny GV antsafa vao haingana, nilaza fa: “Raha nomanina ho an'ny morontsiraka atsinanana na ny morontsiraka Andrefana ao Etazonia ity karazana tetikasa ity, dia tsy handefitra amin'izany velively ny Amerikanina. Nahoana no Henoko? “
Nandritra ny fahavaratra lasa teo, nisy ireo mpanao hetsi-panoherana nankany amin'ny ranomasina nandeha kayaks na lakana, mba hanohitra ny fikarohana ao ambanin-dranomasina ao amin'ny Helodranon'i Oura, manerana an'i Henoko, talohan'ny nisian'ny fananganana.
Manome vaovao farany ara-potoana momba ny fihetsiketsehana Henoko ihany koa ny tenirohy Twitter #henoko.
Henoko.net dia bilaogy ahitana vaovao farany matetika izay manome ny antsipirihan'ny fitantarana ny fihetsiketsehana sy ny famoretana ataon'ny Mpiambina morontsiraka amin'ny fihetsiketsehana Tamin'ny 14 Septambra ny vaovao farany indrindra: